Hafindra any Warwick ny Foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Chol Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Nzema Ossète Ourdou Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tamoul Tarasque Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Yorobà Zoloa tzeltal
Nividy tany any New York ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny Jolay 2009. Kasaina hafindra any mantsy ny foiben’izy ireo. Mirefy 102 hektara io tany io ary 80 kilaometatra eo ho eo, any avaratrandrefan’ireo tranobe any Brooklyn, New York, izay efa nampiasaina nanomboka tamin’ny 1909.
Vavolombelona 800 eo ho eo no hipetraka sy hiasa any amin’ilay toerana vaovao. Hisy tranobe roa hatao birao any ary hisy tranobe efatra hatao trano fonenana. Hisy tranombakoka tsotsotra koa kasaina haorina ary haseho ao ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah ankehitriny.
Hirefy 18 hektara ny velaran’ireo trano rehetra amin’ny fitambarany. Tsy hokasihina kosa ny ambin’ny tany novidina, izay misy ala sy rano. Tsy hahitana bozaka be velarana manodidina an’ilay toerana fa ala kosa no ho tazana manodidina azy.
Nataon’ny mpanao mari-trano hitsitsy angovo ireo trano vaovao. Tsy dia hanimba tontolo iainana ilay toerana amin’izay sady ho kely kokoa ny vola lany. Horakofana zavamaniry tsy dia mila fikarakarana, ohatra, ny tafontrano mba hampihenana ny fikorianan’ny ranon’orana sy hihazonana ny mari-pana ho antonony foana ao anatin’ireo trano. Ny hazavana avy amin’ny masoandro koa no hampiasaina amin’ireo birao, ary tena hatao izay hitsitsiana rano.
Inona no anton’ilay fifindran-toerana? Tany Brooklyn ihany taloha no nanaovana pirinty an’ireo Baiboly sy boky sy gazety ara-baiboly. Manao pirinty koa anefa izao ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any an-tany hafa. Tamin’ny 2004, dia nafindra tany Wallkill, any New York, ny fanaovana pirinty sy ny fandefasana entana ho an’ny faritr’i Etazonia. Any amin’ny 145 kilaometatra any avaratrandrefan’i Brooklyn no misy azy io.
Nodinihina koa ny vola lany. Mandany vola be ny fikojakojana an’ireo trano maromaro any Brooklyn. Navondrona any amin’ny toerana iray ilay foibe mba hahafahan’ny Vavolombelona hampiasa tsara kokoa an’ireo vola natao hanohanana ny asa fampianarana Baiboly ataony.
Misy fandalinana mifandray amin’ny tontolo iainana koa tsy maintsy hatao alohan’ny hahazoana ny fahazoan-dalana farany. Hatomboka amin’ny 2013 ny fanorenana, raha tsy misy ny sampona, ary hovitaina ao anatin’ny efa-taona ilay tetikasa.
Manana foibem-pampianarana any Patterson, New York, koa ny Vavolombelon’i Jehovah, ankoatra an’ilay fanontam-pirinty any Wallkill, New York. Miandraikitra biraon’ny sampana any amin’ny firenena maro koa ilay fikambanana. Misy 7 500 000 mahery ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany.